MR LI MAAL MA HAYO: Milan oo duufaan maaliyadeed dhex muquuranaysa! (4 xaaladood oo suurtagal ah) – Gool FM
MR LI MAAL MA HAYO: Milan oo duufaan maaliyadeed dhex muquuranaysa! (4 xaaladood oo suurtagal ah)
(Milano) 25 Maarso 2018 – Dunida kooxda AC Milan ayay ka kacaysaa duufaan cusub, sanad uun kaddib markii ay gashay gacanta ganacsade Chinese ah oo la yiraahdo Yonghong Li, kaasoo xaaladdiisa dhaqaale haatan laga dayrinayo.
Yeelkeede, warsidaha La Gazzetta dello Sport ayaa sheegaya inay kooxda Rossoneri halis ugu jirin inay musallifto, sida ay qorayeen dadka qaar, wuxuuna sheegayaa inaysan dhibaatadu saamayn doonin naadiga, balse ay kaliya ku egtahay Mr Li.
SUGITAAN DAAHAY – Berri waxaa bilaabmaya todobaad muhim u ah mustaqbalka Milan, waayo waxaa weli la sugayaa 10 milyan (€ 37.4 milyan guud ahaan) oo lagu socodsiiyo howl maalmeedka naadiga, taasoo howsha lagu wado inaa 30-ka Juun.
HADDII AANAY LACAGTANI IMANIN MAXAA DHACAYA?
La Gazzetta dello Sport ayaa qoray ilaa afar xaaladood:
Aragtida 1-aad: Waa in uu Mr Li bixiyaa lacagaha laga sugayo oo ay ugu horreeyso 10 milyan oo euro, taasoo dalladdan Chinese-ka ihi shaqadeeda kusii wadan karto.
Aragtida 2-aad: Waa inay soo fara gelisaa sharikadda qaanta badan ku leh ee Elliott: Paul Singer oo hay’addaa hoggaamiya ayaa la diyaar ah 35 milyan oo euro, taasoo howsha lagu wadayo ilaa xagaaga, balse waxay kordhinaysaa qaantii hore.
Aragtida 3-aad: Waa inuu Fassone ku guulaystaa in uu helo bankiyo diyaar u ah inay dib u bixiyaan qaanta Elliott oo gaareysa 303 milyan oo euro, waxay Milan u baahan tahay ilaa 500 milyan oo ay ku bixiso muddo 5 sano ah, balse taasi way adag tahay marka la eego suuqa haatan, sida uu qabo Il Sole24Ore.
Aragtida 4-aad: Waa dookha ugu dambeeya waana in uu Mr Li kooxda farta ka saaraa Elliott Mangement; Waxaa deeto bilaabmaya xaalad kala guur ah oo ay hay’addani dib ugu iibinayso AC Milan iyadoo siinaysa qofkii soo bandhiga lacagta ugu fara badan, kaddibna waxay qaadanaysaa kharashkii laga qabey iyadoo wixii soo harana farta ka saareeysa Mr Li.
Si kastaba, xaaladda Milan waa ka fogtahay mid nabadeed.
Thibaut Courtois oo dhaawac ku seegaya kulanka xulka Sucuudiga iyo Chelsea oo wal walsan ka hor kulanka Tottenham